Madaxweyne Siilaanyo Oo Maal-geliyay Tartan Quraanka Kariimka ah oo Xukuumaddu Qabatay | Salaan Media
Madaxweyne Siilaanyo Oo Maal-geliyay Tartan Quraanka Kariimka ah oo Xukuumaddu Qabatay
Baabuur ayaa lagu abaal marinayaa Tartamaha Ku guulaysta
Hargeysa, (SM)- Xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay qaban-qaabisay qabashada tartan Qur’aanka Kariimka ah, iyadoo ay ka qayb-gali doonaan 19 arday oo ka kala yimi dhamaan gobollada dalka, isla markaana lixda gobol mid kasta ay ka socdaan 3 arday iyo hal arday oo ka socda gobolka Buuhoodle.
Xaflada lagu furayay tartanka Qur’aanka Kariim ee ay qaban-qaabisay xukuumadda Somaliland ayaa maanta lagu qabtay Masaajidka Cali Mataan ee badhtamaha caasimadda Hargeysa.
Tartankan ayay ardaydu ku tartami doonaan 30-ka jis ee Qur’aanka Kariimka ah, isla markaana waxa uu socon doonaa muddo saddex maalmood ah.
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa bixiyay abaal-marinta tartankan lagu bixin doono, iyadoo qofka ku guulaysta kaalinta koowaad la siin doono baabuur.
Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Aw-qaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed oo ka hadlayay furitaanka xaflada tartanka Qur’aanka Kariimka ah ayaa in ujeedadiisu tahay in kor loo qaado Kitaabka Qur’aanka Kariimka ah, isla markaana dhalinyarada lagu baraarujiyo diinta. “Tartankan magac kuma doonayno, ee waxaanu isleenahay waajibaadka iyo masuuliyada idinka saaran kor u qaadida kitaabka Illaahay iyo Qur’aankiisa qayb ka mid ah maanta (shalay) kor u qaada.” ayuu yidhi Wasiirku.
Wasiirku waxa uu sheegay in Madaxweynaha Qaranka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) uu tartankaas ugu deeqay baabuur la siin doono qofka kaalinta koowaad ku guulaysta, waxaanu isagoo arrimahaas ka hadlaya. “Madaxweynaha qaranka Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa go’aansaday, isla markaana si farxadle u soo dhaweeyay inuu bixiyo abaal-marintaas qiimaha badan oo qofka ku guulaysta kaalinta koowaad la siin doono baabuur, iyadoo dadka kale ee kaalmaha kala duwan ku guulaystana la siin doono abaal-marin ay ku farxaan. Runtii Qur’aanku wax walba wuu qaalisan yahay oo in diyaarado iyo maraakiib lagu abaal-mariyo ayay ahayd qofka ku guulaysta, laakiin waxaanu uga jeednaa oo keliya inay indheheena kusoo jeedino qiimaha uu leeyahay Kitaabka Qur’aanka Kariimka ah, waxa kale oo aanu uga jeednaa inaanu dhalinyarada kusoo jeedino Kitaabka Qur’aanka Kariimka ah.”